Ogaden News Agency (ONA) – Xubnaha Jaliyada Ogadenya ee Gobolka Minnesota oo Shir Muhiim ah isugu Yimid. Maxaase lagu go,amiyay?
Xubnaha Jaliyada Ogadenya ee Gobolka Minnesota oo Shir Muhiim ah isugu Yimid. Maxaase lagu go,amiyay?
Malintii Sabtida ahayd ee ay tarikhddu ku begnayd 02 November 2013 ayaa waxaa shirkii bilahaa ahaa isugu yimid Jaaliyada Somalida Ogadenya ee gobolka Minnesota. Shirkan oo sii wayn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar kamid ah masuuliyiinta JWXO, mamulada jaliyadaha ee Magaloyinka gobolka Minnesoya iyo xubnaha JWXO ee magaloyinka matanaha ah ee Minneapolis/St.paul.
Sida cadada u ah maamulada JWXO waxaa lagufuray wacdi iyo waano diini ah oo uu soo jeediyay Hogaanka arimaha diinta ee Jaaliyada Ogadnenya ee Minnsota, Halgame, Sheekh Cabdifatax Carab.
Wacdigas kadib waxaa codbahiyaha lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha Jaliyada Ogadenya ee Minnesota Mudane Cabdinasir Gani oo isagu soo bandhigay waxqabadkii maamulka uu gudomiyaha kayahay mudadiii ay howsha hayeen. Waxaakale oo uu Gudomiye Cabdinasir soo bandhigay qorshayaal cusub oo ay maamulkiisu ku howlgali doonaan si ay u dardar galiyaan dadaalka ay ugu hiilinayaan Halganka ka socda Ogadenya.
Intaas kadib waxaa warbixin muhiih oo meelabadan tabanaysa xubnihii shirka kasooqaybgalay siiyay Hoganka qorshaynta iyo cilmi badhista JWXO Mudane Mohamud Nuur.
Kadib khudbadihii ay mauuliyintu madasha ka soo jeediyeen waxaa ay xubnuha jaliyadu fursad u heleen inay suaala waydiiyaan masuuliyiinta JWXO iyo maamulka jaliyada.
Shirka oo aad muhiim uhaa ayaa waxaa lagu gomiyay qodobadan hoos ku xusan:-
1- In lasii laban laabo dadaalkii iyo tageeradii halganka qori isudhiibka ah ee ay shacabka Somalida Ogadenya heeganka ugu jiraan sidii ay heeryada gumaysiga wayanaha taagta daran iskaga qaadi lahayeen xornima taam ahna ay ku hanan lahayeen.
2- In shir caalami ah lagu qabto gobolkan Minnesota bishan November dhexdeeda.
3- In lasii badiyo dadalka loogu jiro in saxiibo caalami ah loo sameeyo qadiyada Ogadenya.
Ugu danbayntii waxay dhamaan xubnihii iyo masuuliyiintii madahs joogtay balan ku qaadeen inay sii wadayaan hiilada ay la garabtaganyihiin halganka Ogadenya inta ay shacanka dulman ee Ogadenya ay ku nalodan xoriyad taam ah.